I-Amadeus: inxibelelene ngokusondeleyo kukhenketho | Ezezimali
Mhlawumbi esinye sezona ndlela-qhinga zotyalo-mali sisebenza ngokusungulwa kwamacandelo anokukhula okuphezulu kwimisebenzi yezoqoqosho kwilizwe lethu. Kwaye kule ngqiqo, akukho mathandabuzo ukuba enye yezona zibalulekileyo, mhlawumbi eyona ibalulekileyo, yi turismo. I-Amadeus idityaniswe ngokusondeleyo kuyo. Inokuba yenye yeendlela ezilungileyo zokuphela konyaka kwaye ngeenjongo zokwandisa imisebenzi esiyenzayo kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba i-Amadeus yenye yeendawo zokulingana zaseSpain ezineyona nto ilungileyo kwezobuchwephesha okwangoku. Umncinci ngokwexesha elifutshane neliphakathi, ekulungeleyo ukukhetha kulo ukuthengwa kwezabelo zakho ukwenza ukonga kunenzuzo ukusukela ngoku. Kuba, enyanisweni, lelinye lamaxabiso anokuthi enze okona kulungileyo kwiinyanga ezizayo. Ngokukodwa ukuba imeko yeemarike zezemali iyanda ukusukela ngoku.
Akunakulityalwa ukuba imakethi yezokhenketho ngokubanzi ihlala yomelele kakhulu ngaphandle kokwehla okuthile okwenzekileyo kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Kodwa nayo yonke into, igcina imida esele inomdla kakhulu. Kwelinye icala, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba amaxabiso ecandelo lezokhenketho kwizabelo zeSpain azikho kangako. Kwaye enye yazo ngokuchanekileyo yiAmadeus, ekwabandakanywa kwisalathiso esikhethiweyo kwimarike yesitokhwe sikazwelonke, Ibex 35. Into ekuya kuthi, nangayiphi na imeko, ihlahlelwe ukwenza iphothifoliyo elandelayo yezokhuseleko kwiminyaka embalwa ezayo.
1 Ukhenketho lukhula nge-5%
2 I-Amadeus: enokubakho okuphezulu okuphezulu
3 Ingeniso yabo ikhule nge-5%
4 Imida engcono yezoqoqosho
5 Ukwanda kwamanani kwixabiso lawo
6 Kudweliswe kumanqanaba ee-euro ezingama-64
Ukhenketho lukhula nge-5%
Abakhenkethi bamanye amazwe abatyelele iSpain kwinyanga ephelileyo banyuke nge-5% ukongeza I-7,6 yezigidigidi ukuya kwi-73,9 yezigidigidi abasindwendweleyo kwiinyanga ezili-10 zokuqala. Njengokuchitha kwakho, ikhule ngokukuko. Ngayiphi na imeko, inyani efanelekileyo kukuba imeko eqale kwikota yesibini yaphulwe ngenxa yokuba isesikweni isine kwishumi ngaphantsi kokufika, ngaphandle kokongeza i-4,6% ngaphezulu kwenyanga enye ka-2017.
Ngale ndlela, ngaphezulu kwe-8.148 yezigidi yayiyinkcitho erekhodwe ngabakhenkethi kwinyanga ephelileyo, ngokweedatha ezivezwe namhlanje yiSaveyi yeNkcitho yabakhenkethi (i-Egatur) yeZiko lezeNkcukacha-manani leSizwe. Kuyo nayiphi na imeko, oku kukonyuka okubeka inkcitho ephakathi kubakhenkethi kwi-1.067 euro, kwaye kumele Ukuhla nge-0,4% ngonyaka. Ngayiphi na imeko, ibonisa enye yezona zinto zichaphazelekayo kuqoqosho lwaseSpain kwaye ngale ndlela ayizukuba ngumbono ombi ukubekwa kwinkampani edwelisiweyo kweli candelo libalulekileyo.
I-Amadeus: enokubakho okuphezulu okuphezulu
Ukusuka kule ndawo yokujonga, le nkampani idwelisiweyo yenza ithuba elihle lokuthenga kuba inika ithuba lokuphononongwa kufutshane Amanqanaba angama-40%. Ukusuka kwi-euro ezingama-81 ngesabelo ngasinye ekurhweba kuso ngoku nasemva kohlengahlengiso lwamva nje oluvela kwicandelo lobuchwephesha, elivumela ukutyala imali kwiziphindaphindo ezinomdla ngakumbi. Kwelinye icala, inesabelo sesahlulo se-2,1%. Kuyinyani ukuba ayisiyoyona mbuyekezo inomtsalane ebonelelwa ziimarike zolingano lukazwelonke. Kodwa kuyo nayiphi na imeko, yinkuthazo entsha yokuthatha izikhundla kweli xabiso likhethekileyo lemarike yentengiso.
I-Amadeus ngoku ibonelela ngovavanyo oluphezulu ngokwenyani olusekwe kwezi ngxoxo zilandelayo. Kwelinye icala, yakhe ukubonakala kwemali kunye nemida kwizisombululo ze-IT. Kwaye kwelinye icala, ukwandiswa kwayo kwicandelo lehotele ngokudityaniswa kwenkqubo eyaziwa ngokuba yi-Travel Click. Kananjalo ayinakulityalwa ukuba le nkampani iya kugcina ukubonakala okuphezulu kweziphumo zayo kunye nezinto ezisisiseko. Ukuya kuthi ga ngoku ikhoyo kwipotifoliyo yotyalo-mali yenxalenye elungileyo yeearhente zezemali. Ukuba ngomnye wabagqatswa abangena kwiimarike zezemali kunyaka onzima kakhulu kwiimarike zezabelo.
Ingeniso yabo ikhule nge-5%
I-Amadeus IT Group SA ifumene ingeniso ehlengahlengisiweyo yeenyanga ezingama-886.6 kwiinyanga ezilithoba zokuqala zika-2018. Oku kubonisa ukukhula kwe-5.1%, xa kuthelekiswa nelo xesha linye kunyaka ophelileyo. Kwelinye icala, ingeniso ka-Amadeus ikhule nge-4,6% ukuya kwi-3.683,8 yezigidi ze-euro, ngelixa i-EBITDA inyuke nge-8,6% ukuya kwi-1.588,0 yezigidi zeerandi. Olunye ulwazi olunayo Inkxaso yabatyali mali ngokubonisa ukuba ingxelo yabo yeeakhawunti ihambelana noko kulindelwe ukuba ixabiso lifikelele ekuqaleni konyaka ophelileyo.
Njengakwisiqingatha sokuqala sonyaka, kwikota yesithathu, zombini ingeniso yethu kunye ne-EBITDA iqhubekile ichaphazeleka kakubi kukuhla kwezinga lotshintshiselwano (phakathi kwedola yaseMelika kunye neyuro uqobo), nangona ukuya kwinqanaba elincinci kunelo Iikota ezimbini zokuqala zonyaka. Kwiikota ezintathu zokuqala zonyaka, ingeniso yandiswe nge-7.7%, ngaphandle kwaleyo Iziphumo zemali (ezithathwe ikakhulu kukuhla kwezinga lonaniselwano phakathi kwedola yaseMelika kunye neyuro ngokunxulumene nonyaka ophelileyo).
Imida engcono yezoqoqosho
Kwelinye icala, ixesha leenyanga ezisithoba, i EBITDA, ngaphandle kwe-IFRS kunye neziphumo zemali (ezibangelwe kukutshintsha-tshintsha kwemali ezahlukileyo kweli xesha) zikhule ngezinga eliphezulu lenombolo enye zaze zavelisa ulwandiso oluncinci lomda we-EBITDA. Ezi datha zikhokele inkampani uqobo ukuba igxininise ukuba "sihlala sinethemba kwaye siqinisekile ukuba sizakuqhubeka nale meko yokukhula okuqinisekileyo kunyaka ophelileyo." Ukukhuthaza ukuthengwa kwezabelo kwiimarike ze-equity ukuba zihlale kweli xesha sikunyaka omtsha.
Ayimangalisi ke ngoko into yokuba, ebusweni beli meko inikezelwe yinkampani, icandelo elilingene labalamli bezezimali bagqibe kwelokuba bacebise ukuthengwa kwezabelo zabo kunye nethuba lokuphinda livavanywe elihamba kuluhlu. ukusuka kwi-6% ukuya kwi-12%, Ngokusekwe kwiingxelo zabarhwebi abohlukeneyo abahlalutye imeko yezemali yenkampani edwelisiweyo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ngayiphi na imeko, yenye yexabiso elibonisa imeko yobuchwephesha obungcono ngalo mzuzu kanye.
Ukwanda kwamanani kwixabiso lawo
Ngokwezibonakaliso zezobuchwephesha zeAmadeus, imeko yayo yokwenyani idwelisiwe kwinqanaba lokudityaniswa, ukusukela oko kubuyela umva kwangaphambili kunye nokucaca okuphezulu okuphezulu. Ubuncinci ukuya kuthi ga ngoku ixesha elifutshane neliphakathi. Akumangalisi ukuba umthamo weekhontrakthi kunye noluhlu lwe-amplitude ziyanda zombini kwixesha eliphakathi nelide. Kukuphi uphawu oluhle kakhulu lokuvula izikhundla ukusukela ngoku.
Ngomnye umthambo, kwaye uhlala ubhekisa kubuchwephesha bayo, kufanele kuqatshelwe ukuba okwangoku, kwaye ngokwezibonakaliso zayo, eli xabiso le-Ibex 35 lithengisa ngaphezulu kwenkxaso yalo ephambili, ebekwe kwindawo ye-62 Iiyuro ngesenzo ngasinye. Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ixabiso layo kwigophe likhulisa intshukumo ebizwa ukuphosa umva. Oko kukuthi, ukoyisa ukuxhathisa kwangaphambili kwaye kamva kuye kwaba yinkxaso. Ngokucacisa ngokucacileyo okungaxhamlayo okunokuxhamla kwizicwangciso ezingenisa abatyali zimali abancinci nabaphakathi.
Kudweliswe kumanqanaba ee-euro ezingama-64
Eli lixabiso apho izabelo zalo zikhula khona okwangoku kwaye yonke into ibonakala ngathi iya kuba nexesha lokunyusa iinyanga ezimbalwa ezizayo okanye ubuncinci iiveki. Ngeengozi ezimbalwa apha endleleni okoko i Inqanaba lama-62 le-euro ngezabelo, eziyinxalenye ebalulekileyo yexabiso lale nkampani kwicandelo lezokhenketho. Ukuba yile ndlela, ngekhe kubekho uloyiko kwicala labatyali mali. Apho, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba kuninzi okunokuzuzwa kunokulahleka ukuba izixhasi ziyahlonitshwa ngoqeqesho olukhulu kwisicwangciso esenziweyo.
Kuzo zonke ezi zizathu, ayimangalisi into yokuba eli xabiso libalulekileyo lezabelo zeSpain yenye yeempahla ezintlanu zeIbex 35 ezibonise ukubanakho okuphezulu ukusukela ekuqaleni konyaka. Kwicandelo elinokuba yindawo yokusabela xa bejongana neemeko zokungazinzi kwiimarike zezabelo. Apho uxinzelelo lokuthenga lunokuba sisikhokelo ekubhekiswa kuso njengesixhobo sokutshintshiselana ngesitokhwe ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngendlela efanelekileyo kunye nokususa uthotho lomngcipheko kwimisebenzi yalo. Ke ngoko, yenye yeendlela onokukhetha kuzo ngeli xesha lonyaka, nangaphezulu kwezinye zeetshipsi eziluhlaza kwimarike yaseSpain. Apho, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba kuninzi okunokuzuzwa kunokulahleka ukuba izixhasi ziyahlonitshwa ngoqeqesho olukhulu kwisicwangciso esenziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Amadeus: inxibelelene ngokusondeleyo kukhenketho